FAQs - JINDONGCHENG korontada QALABKA CO, LTD..
BOX magnetic IYO DHERI jejebiyey 320E
BOX magnetic IYO DHERI jejebiyey 420E
BOX magnetic IYO DHERI jejebiyey 650E
BOX magnetic IYO DHERI jejebiyey 1000E
BOX magnetic IYO DHERI jejebiyey 1250E
BOX magnetic IYO DHERI jejebiyey 2000E
BOX magnetic IYO DHERI jejebiyey 2500E
BOX magnetic IYO DHERI jejebiyey 3200E
MAKIINADDA QALABKA QALABKA
MAKIINADDA LA SHAQO
QALABKA ISKU DARSAN OO LOOGU TALAGALAY
MAKIINAD GACAN-QAADAN AH OO LACAG-LA'AAN AH
MAKIINADDA KU SOO KORDHAY XARUNTA
Gool CLAMPBAR THE
QALABKA TUBE TUBE
S Sidee ayaad u isticmaali mishiinka?
A Waxa aad ku qori aad workpiece sheetmetal in hoos clampbar ah, beddelato on tirtirayaan, dabadeedna xamili weyn ee (s) in la leexiyo workpiece ah
S Sidee ku lifaaqan clampbar ah?
A In la isticmaalo, waxaa lagu qabtay hoos by electromagnet aad u xoog badan. Waxaa si joogto ah ma ku lifaaqan, laakiin waxa ay ku taalaa ay booska saxda ah by kubada guga-raran dhamaadka kasta ah.
heshiis Tani waxay kuu ogolaanaysaa inaad u sameeyaan qaabab sheetmetal u xiran yihiin, iyo sidoo kale in ay ku bedelan in clampbars kale si deg deg ah.
Q Waa maxay sheet ugu dhumucda waxay xoodaan doonaa?
Waxa A xoodaan doonaa 1.6 mm sheet steel khafiif ah oo dherer buuxa ee mishiinka. Waxaa leexin karo ka sii dhumuc weyn ee dhererka gaaban.
Q Maxaa ku saabsan aluminium iyo ahama?
es A, ee mashiinka JDC Laabista iyaga xoodaan doonaa. magnetism The maraa iyaga oo hoos jiidayaa clampbar fuulay sheet.It xoota doonaa 1.6 mm aluminium dherer buuxa, iyo 1.0 mm ahama dherer buuxa.
S Sidee baad u samaysaa aanan?
Waxaad riix oo ku meel gaar ah u qabto "Start" button oo qoyan. Taasina waxay keentaa in tirtirayaan magnetic iftiinka. Marka aad soo jiid xamili ugu weyn waxaa si toos ah badalato in ay ku tirtirayaan awood buuxda.
S Sidee ayey run ahaantii foorarsato?
A Waxaad u sameeyaan xoodaan gacanta by jiidaya xamili weyn ee (s). Tani kacaba sheetmetal ku wareegsan Geesta hore ee clampbar oo lagu qabtay meel magnetically. qiyaasta xaglaha haboon on xamili kuu sheegayaa xagal ee dogobka laabaya waqtiyada oo dhan.
S Sidee baad u sii daayo workpiece ah?
A aad As soo laabto weyn xamili magnet si toos ah badalato off, iyo clampbar ka booda on kubadaha ay guga-raran helidda, sii daayo workpiece ah.
Q ma jiro magnetism haraaga ah waa laga tegi doonaa in workpiece ah?
A Mar kasta oo mishiinka badalato off, a garaaca wadnaha gaaban dambe ee hadda loo soo diray iyada oo electromagnet in ay de-magnetise iyo workpiece labadaba.
S Sidee baad ula qabsadaan for dhumucdiisuna waxay birta?
A By beddelaan adjusters dhamaadka kasta oo clampbar ugu weyn. Tani badala ansixin ku laabaya dhexeeya hore ee clampbar iyo dusha sare oo shaqo ku jirase aad laabaya markii dogobka waa at 90 ° booska.
S Sidee ayaad u sameeyaan qarkiisa ah giringiriyey?
A By isticmaalaya mashiinka JDC Laabista in duub sheetmetal marwalba ku wareegsan oo dhererkiisu ah biibiile steel caadiga ah ama bar wareega. Maxaa yeelay, mishiinka magnetically shaqeeya waxa aanan kartaa waxyaabahaan.
Q ma leedahay digsiga-jejebiyey faraha ku tirtirayaan?
A Waxay leedahay set oo ah qaybaha clampbar gaaban oo la wada shidan kartaa sameynta sanduuq.
Q Maxaa caasimadii qaybaha gaaban?
A qaybaha The wada shidan ee clampbar waa in uu ku yaalaa gacanta ku workpiece ah. Laakiin duwan biriiga kale digsiga, dhinacyada sanduuqyada aad noqon kartaa of height aan xad lahayn.
Q Waa maxay clampbar ku gool waayo?
Waxa A waa u sameynta baakidh gacmeed iyo sanduuqyada yar 40 mm qoto dheer. Waxaa laga heli karaa sida dheeraad ah optional iyo waa dhakhso badan in ay isticmaalaan qaybaha gaaban caadiga ah.
Q Maxaa dheer saxaarad clampbar ku gool laab karaa?
A Waxa sameysmi karaa dhererka mid ka mid ah saxaarad dhererka clampbar gudahood. Labada ciyaaryahan kasta oo ka naadi siinayaa kala duwan ee tirada badan oo kala duwan 10 mm ah, iyo jagooyinka boosaska ayaa la si taxadar leh shaqeeyay baxay si ay u bixiyaan oo dhan tirada suurto gal.
S Sidee xoog badan tahay magnet ah?
A electromagnet The aanan karaa 1 tonne xoog 200 mm kasta oo dhererkeedu yahay. Tusaale ahaan, 1250E kor clamps 6 tan oo badan oo dhererkeedu buuxa.
Q magnetism u duugoobi doonaan?
A No, ka duwan magnet-joogto ah, electromagnet ma sii gabowdid kartaa ama wiiqi sabab u isticmaalaan. Waxaa la sameeyey bir-carbon sare Caraabaah in kaliya ay ku xiran tahay koronto in gariiradda ah ay magnetisation.
Q Maxaa dhaxe sahayda loo baahan yahay?
A 240 volts ac. The lagu daydo yar (ilaa 1250E Model ah) ordi ka caadiga ah 10 outlet amp. Daydo 2000E iyo kor u baahan tahay a outlet 15 amp.
Q Maxaa accessories yimaadaan sida caadiga ah la mashiinka JDC Laabista?
A taagan The, backstops, dhererka buuxa clampbar, set oo ah clampbars gaaban, oo ay gacanta ku ah oo dhan waa bixisey.
accessories Q Maxaa Optional?
la heli karo waxaa ka mid ah clampbar cidhiidhi ah, clampbar a gool ah sameynta sanduuq gacmeed dheeraad ah ku haboon, iyo xiirid awood leh hage loogu talagalay goynta dhalanrog-free si toos ah sheetmetal ah.
modle kasta ayaa in stock, waxaan idiin diyaarin karaan maraakiibta ugu dhaqso badan
cabbir Q Shipping?
2000 Powered: 2.2m =2.40³@360kg 1.14m x0.95m x
muuqaalo Q Tusaale
Khamiiska darafkiisa hoose, kasta-xagal qallooca, geesaha duubay, adkaado feeraha, channels Xidhan, Khaanadaha, laalaabka kala gooyey, channels Deep, Ku noqo qallooca, baalal Deep
1. miday badan ka sii badan tahay benders sheetmetal caadiga ah.
2. No xaddidaadda si qoto dheer ee sanduuqyada.
3. sameeyaan karaa channels qoto dheer, iyo qaybaha si buuxda u xiran.
4. tirtirayaan Automatic iyo unclamping loola jeedaa hawlgalka dhaqso, daal yar.
5. calaamad muujinaysa sax ah oo joogto ah xagal dogob.
6. goob Quick oo sax ah stop xagal.
7. qoto dheer cunaha Unlimited.
8. dhererka waynyahay laabaya yada waa suurto gal.
9. Open design dhamaaday ogolaanaya baad qaababka adag.
10. Machines lagu ganged karo dhamaadka-to-dhamaadka muddo dheer laabaya.
11. si fudud islana tooling kartoo (baararka haysa ee gaarka ah cross-qaybood).
12. Is-ilaalinta - Mashiinka aan la rar-karaan.
13. nidaamsan, is haysta oo casri ah design.
Mashaariicda School : sanduuqyada qalab, warqadaha, cookware.
Electronics , jiifku, sanduuqyada, uqaadi kartaa.
Qalab xafiis , armaajo, armaajooyinka, computer-tarabuunka.
Processing Cuntada : saxanka ahama & dushooda kursiga keydka, garbasaarrada dhammayn, buuxdhaafeen.
Calaamadaha ciinwaanka & Ereyada biraha.
Kululeeyayaasha & copper ciqaabtiisa.
Warshadaha : Prototypes, waxyaabaha wax soo saarka, daboolida mishiino.
Korontada : switchboards, iaydoo, lagu xiro nalka.
Automotive : dayactirka, la jiido, meydadka van, baabuurta tartanka.
Beeraha : mashiinada, biinanka, Feeders, qalabka caanaha ahama, cariishyada.
Dhismaha : flashings, facias, albaabka garaashka, dukaamadeena.
Cariishyada Garden, muraayad-guryaha, posts xayndaabka.
Qaboojiyaha : marinnada, gogo 'kala guurka, qolalka qabow.
Q The gaar ah birihii xarunta centerless
kaas oo la soo saaray gaar ahaan foorari JDC ay ™, waxaa loo qaybiyey weheliyaan dhererka dogobka foorarsiga iyo sidaas, sida clampbar ah, qaado laabaya xamuulka u dhow meesha ay yihiin generated.The isku daro saamayn ah ku tirtirayaan ku magnetic la centerless gaarka taagnaa hab in JDCBEND ™ uu yahay mid aad is haysta, keydinta meel, mashiin oo cabirku yahay mid aad u sarreeya xoog-to-miisaanka.
meesha workpiece ah
clampbars Q gool
waayo, si dhakhso ah sameynta sanduuq gacmeed
Q tooling Gaarka ah
si dhakhso ah loo macmalay kartaa oo gogo 'oo bir si uu kaaga caawiyo isku laab-up qaababka adag, iyo shuqul saarka clampbars caadiga ah waxaa lagu beddeli karaa by tooling gaar ah.
Q Operating Buugga
mashiinada Timid Buugga faahfaahsan oo ku aaddan tahay sida loo isticmaalo makiinadaha iyo sidoo kale sida loo sameeyo waxyaabaha caadiga ah ee kala duwan.
Q Hawl Safety
waxaa xoojinaya interlock laba gurran korontada in ay hubisaa in ciidan pre-ku tirtirayaan ammaan ah waxaa laga codsadaa ka hor ku tirtirayaan buuxa dhacdaa.
12-bil damaanad daboolayaa waxyaabo khaldan oo waxaa laynoogu ku saabsan mishiinada iyo accessories.
Q OEM iyo ODM
Waxaan nahay warshad, waxaan aqbali OEM iyo ODM, oo ay dhisaan iskaashi muddo dheer ah la shirkado badan oo ay noo qiimo macquul ah, adeeg heer sare ah.
Q Ma leedahay shahaado CE
haa tahay, waxaan leenahay shahaadada, ii soo sheeg haddii aad u baahan tahay, i waxaa idiin soo diri doonaa.
Q Ma leedahay wakiilka kasta ee USA.
HAA, Waxaan leenahay, ii soo sheeg haddii aad u baahan tahay wax caawimaad ah, waxaan idiin soo dirayaa tel xiriir NO.
Q Ma shahaadada asal ahaan la heli karo?
haa tahay, shahaadada asal ahaan laga heli karo